Miroborobo ny varotra rongony Olona 2 indray no tratra teny Andavamamba sy Antohomadinika
Olona roa no voasambotry ny Sampan-draharaha miady amin’ny zava-mahadomelina ny talata 28 janoary teo teny amin’ny faritra Andavamamba sy Antohomadinika noho ny antony fitanana sy fivarotana rongony.
Vaovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafantarana fa misy toerana fivarotana rongony maromaro eny Antohomadinika sy Andavamamba. Nanao fanadihadiana avy hatrany ny Polisy ka ny talata io tokony ho tamin’ny 12 ora atoandro dia lehilahy iray, 50 taona no voasambotra tao amin’ny IVO Antohomadinika, ary nandritra ny fisavàna ny trano fonenany dia nahitana rongony 28 fonosana tao aminy.
Nandritra ny fanadihadiana azy dia nilaza izy fa lehilahy mandalo isaky ny alatsinainy eny an-toerana no fividianany rongony, ary izy indray no mivarotra izany antsinjarany avy eo. Fantatra ihany koa fa efa mpamerin-keloka ity lehilahy ity satria dia efa nifonja izy ny taona 2017 noho ny antony fivarotana rongony hatrany. Tokony ho tamin’ny 4 ora sasany hariva kosa no voasambotra teo Andavamamba ny vehivavy 1, 36 taona, rehefa avy nanaovana vela-pandrika. Tamin’io fotoana nahasamborana azy io moa dia rongony 4 kitapo kely, milanja 02 kilao no tratra tao an-tranony. Niaiky ihany koa ity vehivavy ity fa mivarotra rongony amin’ny vidiny 500 ariary isaky ny fonosana eny amin’ny faritra Andavamamba. Natolotra ny fampanoavana omaly alarobia 29 janoary 2020 ny raharaha.